Vakodrazana: tafajoro ny vovonana | NewsMada
Vakodrazana: tafajoro ny vovonana
Nampahafantarina tamim-pomba ofisialy, omaly teny Ambatoroka, ny fijoroan’ny Vovonan’ny mpanao vakodrazana malagasy, tarihin’ny filohany, Rakotoarison Joseph, filohan’ny tarika Akon’ny diary.
“Natao ankilabao, hatramin’izay, ny vakodrazana malagasy. Noho izany, anisan’ny tanjona voalohan’ny fikambanana ny hamelo-maso indray sy hanaparitaka ity kanto maha Malagasy ny Malagasy ity”, hoy Rakotoarison Joseph. Ankoatra izany, nametraka vina goavana ny mpanao vakodrazana, ny hananganana trano koltoraly, hivoy manontolo ny vakodrazana malagasy. Manoloana ireo asa lehibe miandry azy ireo, ho vaindohan-draharaha ny hitady mpiara-miasa ho fampiroboroboana ity zavakanto ity.
Tarika miisa 15, samy mpanao vakodrazana, no mpikambana ao amin’ny vovonana, hatreto. Avy eto Analamanga sy avy any Itasy izy ireo. “Vao fisantarana ireo fa hitrandraka hatrany ifotony mihitsy izahay ary hiitatra hatrany amin’ny faritra rehetra ny vovonana”, hoy hatrany ny filohany.
Asa avy hatrany ny an’ireo mpanao vakodrazana… Eo am-panomanana fampisehoana goavana, iarahan’ireo mpikambana rehetra, ny vovonana, amin’izao fotoana izao, ary tsy ho ela io, araka ny nampanantenain-dRakotoarison Joseph hatrany. Marihina fa filoha lefitry ny fikambanana ny Dr Razafindramora Célestine, efa mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny vakodrazana sy ny teatra.